प्रसूतिगृहको नयाँ भवन कुपन्डोलमा – Health Post Nepal
प्रसूतिगृहको नयाँ भवन कुपन्डोलमा
२०७५ भदौ २४ गते ११:०२
परोपकार प्रसूतिगृह थापाथलीले कुपन्डोलमा २ सय शय्याको भवन बनाउने भएको छ । अस्पतालका निर्देशक जागेश्वर गौतमका अनुसार बिरामीको बढ्दो चाप तथा सेवाको गुणस्तरलाई ध्यान दिई २ सय शय्याको भवन थप गर्न लागिएको हो । हाल अस्पतालले ४ सय १५ शय्यामार्फत बिरामीलाई सेवा दिँदै आएको छ ।
अस्पतालले कुपन्डोलमा ३ करोड लगानीमा भवन निर्माण सुरु गर्न लागेको हो । त्रिवर्षीय योजनाअनुसार नयाँ भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने गौतम बताउँछन् । भवन निर्माण पूर्णतः सरकारी लगानीमा हुन लागेको हो । भवन निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् अस्पतालले दिँदै आएको सेवामा विस्तार र गुणस्तरमा वृद्धि आउने गौतम बताउँछन् । यसका साथै भवन निर्माणपश्चात् अस्पतालले सुपर स्पेसालिटी सेवा, गाइनो अल्कोली, मिमल्ली इन्भेसी सर्भे, थिनो मेटरनललगायत सेवासमेत विस्तार गर्ने उनको भनाइ छ ।
स्थापनाकालमा ४० शय्याबाट सुरु भएको प्रसूतिगृहमा अहिले ४ सय १५ शय्या सञ्चालनमा छन् । ०७२ को भूकम्पले अस्पतालको मुख्य भवन क्षतिग्रस्त भएपश्चात् अस्पताल ३ सय ५० शय्यामा खुम्चिएको थियो । बिरामीको चाप अत्यधिक बढेका कारण कतिपय अवस्थामा अस्पताल भर्ना हुन आउने बिरामीले विनाबेड उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता भएका कारण शय्या बढाउन आवश्यक भएको गौतमको भनाइ छ ।
अस्पतालले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि नवजात शिशु निःशुल्क उपचार सेवासमेत विस्तार गरेको छ । शय्या अभावका कारण बिरामीलाई नफर्काउने तथा रेफर नगर्ने अस्पतालको स्थापनाकालदेखिकै नीतिअनुसार आवश्यक पर्दा अस्थायी शय्याको समेत व्यवस्था गरी सेवा दिने गरेको गौतम बताउँछन् । सरकारले उच्च मातृमृत्युदर कम गर्न लागू गरेको ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’लाई सफल कार्यान्वयन गराउन प्रसूतिगृहले अहम् भूमिका खेलेको गौतमको दाबी छ ।
प्रसूतिगृहले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा २८ हजार ५ सय ३ बिरामी अस्पताल भर्ना हुन आएकामा डेलिभरी केसका २० हजार ६ सय ८० को सफल डेलिभरी गराएको तथ्यांकसमेत सार्वजनिक गरेको छ । अस्पतालले औसतमा दैनिक ५७ महिलाको डेलिभरी गराउने गरेको छ ।
परोपकार प्रसूतिगृह राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट आइआरसी मान्यता पाई स्वतन्त्र रुपमा अनुमति दिन योग्य संस्था भइसकेको गौतम बताउँछन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अस्पतालले उल्लेख्य योगदान पुर्याएको उनको दाबी छ ।
अस्पतालमा हरेक प्रकारका अस्पतालजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि विस्तृत अध्ययन गरी बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरिएको छ । जसमा अस्पतालबाट दैनिक निस्कने सालनाल तथा सड्ने फोहोरसमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । अन्य किसिमका फोहोरलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार छुट्याई बिक्री–वितरणमार्फत आयआर्जनसमेत गर्ने गरिएको छ ।
विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी नर्सिङ कलेजहरुको विशेषगरी प्रसूति नर्सिङ (मिडवाइफरी) शिक्षाका लागि प्रसूतिगृह केन्द्र बनेको छ । ०७३ देखि अस्पतालले आफैँ परोपकार नर्सिङ क्याम्पस सञ्चालन गर्दै आएको र निकट भविष्यमा देशको आवश्यकताअनुसार मिडवाइफरी नर्सिङ अध्यापन कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
दशैंलगतै कोरोना संक्रमण बढेपछि तिहारमा काठमाडौंमा निषेधाज्ञा जारी होला
कात्तिक ७ र ८ मा बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ तथा जुकाको औषधि खुवाइने
भक्तपुर अस्पतालले माग्यो कर्मचारी
पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सर्‍याे वर्षा, कहाँ–कहाँ छ जाेखिम ?
आज कहाँ–कहाँ पानी पर्छ?
बढ्दै संक्रमित, एकैदिन १०९६ संक्रमित